Kedu ihe bụ isi websaịtị Google na ihe kpatara ahụmịhe ibe? | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 9, 2021 Tọzdee, Septemba 9, 2021 Douglas Karr
Google kwupụtara na Core Web Vitals ga -abụ ọkwa dị elu na June 2021 na mwepụta a ga -agwụcha n'August. Ndị mmadụ na weebụsaịtịBuilderExpert achịkọtala ozi ozi zuru oke nke na -agwa onye ọ bụla nke Google okwu Isi Weebụ Weebụ (CWV) na Ahụmahụ Peeji Ihe kpatara, otu esi atụ ha, yana otu esi ebuli maka mmelite ndị a.
Kedu ihe bụ isi websaịtị Google?
Ndị ọbịa nke saịtị gị na -ahọrọ saịtị nwere nnukwu ahụmịhe ibe. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, Google agbakwụnyela ụkpụrụ njirimara ndị ọrụ a dị ka ihe maka nsonaazụ ogo. Google na -akpọ ndị a Isi Weebụ Weebụ, otu igwe metrik metụtara ọsọ, nzaghachi, na nkwụsi ike nke anya, iji nyere ndị nwe saịtị aka ịlele ahụmịhe onye ọrụ na weebụ.
Ọgbakọ ọchụchọ Google
Isi Weebụ Weebụ bụ usoro nke ezigbo ụwa, metrik hiwere isi nke na-akọwapụta akụkụ dị mkpa nke ahụmịhe onye ọrụ. Ha na -atụ nha nke iji web dị ka oge ibu, mmekọrịta, yana nkwụsi ike nke ọdịnaya ka ọ na -ebu (yabụ na ị gaghị emetụ bọtịnụ ahụ aka na mberede mgbe ọ na -agbanwe n'okpuru mkpịsị aka gị - lee ka iwe si dị gị!).
Isi ihe ntanetị Web na -etinye metrik nkenke:
Kachasị Oru Na-ese (LCP): ihe loading arụmọrụ. Iji nye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, LCP kwesịrị ime n'ime 2.5 sekọnd nke mgbe ibe ahụ bidoro itinye.
Mbido Oge Mbido (FID): ihe mmekọrịta. Iji nye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, ibe kwesịrị inwe FID nke 100 miliseconds ma ọ bụ obere.
Mgbanwe Mbugharị Mgbakọ (CLS): ihe nkwụsi ike nke anya. Iji nye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ, ibe kwesịrị idobe CLS nke 0.1. ma ọ bụ obere.
Ị nwere ike nweta mkpesa na metrik ndị a na -eji ngwaọrụ Pagespeed Insights nke Google ma ọ bụ mkpesa Core Vital na njikwa ọchụchọ Google.
Nkwupụta Nghọta Google Pagespeed Akụkọ CWV njikwa njikwa Google
Kedu ihe bụ Ahụmịhe Peeji nke Google?
The ahụmịhe ibe mgbaàmà na -atụ akụkụ nke otu ndị ọrụ si aghọta ahụmịhe nke imekọ ihe na ibe weebụ. Ịmalite maka ihe ndị a na -eme ka weebụ bụrụ ihe na -atọ ụtọ maka ndị ọrụ n'ofe ihe nchọgharị na ihu weebụ niile, ma na -enyere saịtị aka ịgbalite na atụmanya ndị ọrụ na mkpanaka. Anyị kwenyere na nke a ga -enye aka na ọganiihu azụmaahịa na weebụ ka ndị ọrụ na -etowanye onwe ha ma nwee ike jiri obere esemokwu na -emekọrịta ihe.
Kedu ihe bụ isi SEO dị mkpa SEO na ndị na -ewu weebụsaịtị?
N'iji eserese onyonyo zuru ezu, nyocha mbụ, na ndụmọdụ nwere ike ime ihe, infographic Kedu ihe bụ isi SEO dị mkpa SEO na ndị na -ewu weebụsaịtị na -akụda ihe ọhụrụ Google Web Vital na mmelite Ahụmịhe Peeji, ka CWV siri metụta arụmọrụ onye nrụpụta webụsaịtị ecommerce asaa a ma ama, yana otu esi ebuli webụsaịtị ejiri ya onye nrụpụta maka ha.
Nke a bụ ihe agụnyere na infographic, (ya na njikọ ima elu na ngalaba dị mkpa nke ntuziaka isi mmalite):
Ndakpọ nke mmelite weebụ dị mkpa nke Google yana mmelite Ahụmịhe Peeji yana otu ha si arụ ọrụ
Nghọta banye na mmetụta na ndị na -ewu weebụsaịtị na CWV Pro/Cons
Nyocha weebụsaịtịBuilderExpert nke 7 Ndị na -ewu weebụsaịtị Ecommerce - Shopify, Wix, BigCommerce, Squarespace, Shift4Shop, Volusion, Square Online (3000+ URLs) - nwalere megide CWV, Oge nzaghachi sava, yana akara arụmọrụ, n'ofe desktọọpụ na mkpanaka
Esi nwalee webụsaịtị maka Isi weebụsaịtị Vital
Atụmatụ nkwalite maka ndị na -ewu weebụsaịtị/weebụsaịtị
Nke a bụ infographic zuru ezu, jide n'aka na ịpị aka na akụkọ ha zuru oke nke na-emebi ngalaba nke ọ bụla yana otu ị ga-esi họrọ Sistemụ Njikwa ọdịnaya (CMS) nke nwere ike ịchọcha nke ọma.
Tags: isi web vitalscwvdesktọọpụ vs mobilena izo ya ezondugooglenghọta googlepepeedNchọgharị Nchekwa Googleimage mkpakọNke kacha buo ibuekwenti-enyiahụmịhe ibemmelite ahụmịhe ibenghọta peeji nkesecurityAọsọ ọsọwebsitewix